Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: Tsy manaiky hataon’ny Hvm fitaovana politika ny vehivavy
INTY SY NDAY: Tsy manaiky hataon’ny Hvm fitaovana politika ny vehivavy
Manangatra ny fanao namoehitra fony Pisodia sy Arema ary Tim. Ny Hvm indray no mampanangatra izany. Omaly dia noentanina sy noterena ho tsy maintsy tonga manotrona ny hetsika hataon-dRtoa Rajaonarimampianina Voahangy, vadin’ny filohampirenena, ny vehivavy mpampianatra mpanabe teto amin’ny fari-piadidiam-pampianarana (Cisco) teto Antananarivo Renivohitra. Ny antony dia hoe “ho fanamarihina ny Andron’ny Vehivavy (8 Martsa) eo anivon’ny mpampanatra mpanabe”. Tetsy amin’ny Ivon-toeram-pirenena fanofanana mpampianatra (Institut National de Formation Pédagogique = Infp) etsy Mahamasina no nanaovana azy io.
Azo ambara aloha fa tsy nahomby ny jadona sy fanerena nampiharina tamin’ireo vehivavy mpampianatra mpanabe eto Andrenivohitra omaly, ary efa taratry ny tsy fahazoan’ny Hvm ny fon’ny mpampianatra mpanabe eto izany. Ny antony anaovana izany dia tsy feno akory ny efi-trano nandraisana io fihaonana io.
Tonga teny tokoa ny vadin’ny filohampirenena, Rtoa Rajaonarimampianina Voahangy, ary ny tena foto-diany teny izany dia nanao fampielezan-kevitra pôlitika tamin’ireo vehivavy mpampianatra mpanabe ka notakonana tamin’ny fananolotra fanomezana ho an’ireto mpampianatra mpanabe izany. Kojakoja ao an-tokatrano, fitahirizan-tsakafo (hot pot) no nomena an’ireo mpampianatra (tamin’ny taon-dasa moa dia lovia no nomena azy ireo). Omaly takariva ihany dia efa maro tamin’ireo mpampianatra no velon-taraina fa “fitehirizan-tsakafo efa lany andro (périmé) no nomena azy ireo fa tsy mahatana hafanana akory”.
Fa tetsy ankilan’io, nandritra ny kabary dia niseho hoderaina tao ny Loholona Rasamoelina Brigitte, ka nentanin-kafanam-po ary nitanisa izao tranga nambarany fa zava-bitan’ny Filohampirenena Rajaonarimmapianina nandritra ny efa-taona ho an’ny mpampianatra mpanabe izao. Dia nitalakotroka aoka izany ange izany fidokafana an-dRajaonarimampianina mivady izao. Isan’ny nambaran’ity ben’ny tanàna teo aloha teny Ambohimalaza ity àry ny hoe “mangataka ny hirotsahan-dRajaonarimampianina hofidiana filohampirenena izahay”.
Horakoraka tsy nifandrenesana no nasetrin’ireo mpampianatra mpanabe tonga tao. Horakoraka nanehoan’izy ireo tsy fankasitrahana izany teny izany satria karazan’ny famitahana ihany no natao. Hetsika ny vehivavy mpampianatra mpanabe no nanentanana anay tany amin’ny toeram-piasanay nefa nahoana no resaka fandrotsahana an-dRajaonarimampianina hofidiana filohampirenena no kabary natao, izay nambara hoe “izahay”, hoy ny maro tamin’ireo tonga teny. Tsy nisy nampitondra teny an-dRtoa Loholona Rasamoelina Brigitte ho amin’izany teny fiangaviana firotsahana hofidiana izany mihitsy fa misandoka anay tonga eto izy, hoy ny sasany.
Etsy andaniny, re avy amin’ny vehivavy mpiasan’ny Antenimierandoholona koa, herinandro vitsy lasa izay, fa nentanin-dRtoa Loholona Rasamoelina Brigitte, niakatra tao amin’ny efi-trano fivoriana ny vehivavy mpiasan’ny Antenimierandoholona, dia nasaina nameno taratasy efa vita printy. Tao anatin’izay no indro niakatra ka niditra tao ny Filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo, hoy ihany ireo mpiasan’ity andrim-panjakana ity. Avy hatrany dia nanambara ny Loholona Rasamoelina Brigitte, hoy ihany ny akom-baovao hoe “eny àry fa eto anatrehan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona sady Filoha Nasionalin’ny Hvm isika izao, ka raha tena mazoto hanatevin-daharana ny Hvm ianareo, dia sahy ve ianareo hanao fanamian’ny Hvm rehefa milahatra amin’ny faha-8 martsa ho avy izao?”
Sanganehana sady natahotra no tezitra ny ankamaroan’ireo vehivavy mpiasan’ny Antenimierandoholona tamin’izay andro izay, ary maro no nanda rehefa tsy teo imaso imaso intsony.